नेपाली काँग्रेस पाल्पाका सभापति रानाको दोस्रो कार्यकाल सकिदै
नेपाली काँग्रेसको महाधिबेशन नजिकिदै छ । आगामी साउन १२ गते देखी वडा देखी केन्द्र सम्म अबिधेशन हुदैछ । आगामी अबिधेशन कसरी अगाडी बढेको छ, र पाल्पा जिल्लाका सभापति वीर बहादुर राना दोस्रो कार्यकाल कस्तो रह्यो यसै विषयमा पाल्पापाटीका सम्पादक विष्णु घिमिरेले नेपाली काँग्रेस पाल्पाका सभापति वीर बहादुर रानासंग गर्नुभएको कुराकानीका केही अंशहरु यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
तपाई २ कार्यकाल पार्टी सभापति हुनुभयो, यो अवधीमा तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
धन्यवाद । म जुन वेला २०६७ सालमा नेपाली काँग्रेसको जिल्ला सभापति भए, मैले विगतमा काम गरेका अनुभवी साथीहरु र नयाँ साथीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर काम गरे । पार्टीका लागि अहोरात्र खटिने साथीहरु र उर्जावान साथीहरुलाई समेटेर काम गरे । मैले संस्थागत हिसावले काम गरे जस्तो लागेको छ ।
विगतमा लामो समय सम्म द्धन्द चल्यो जसका कारण पनि पार्टी र अन्य संगठनहरु निष्किृय जस्तै थिए, पार्टीका कार्यकर्ता मारिएका र विस्थापित भएका थिए । पार्टीका काम तथा विषयहरु तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका थिएनन् । म निर्वाचित भएपछी पार्टीका विषयबस्तुहरु तल्लो तहसम्म पुरयाउने काम गरे, पार्टी पार्टी जसरी चल्न सकेको थिएन, तल्लो तहसम्मलाई परिचालन गर्ने काम गरेको छु । निर्धक्क संग काँग्रेस हुँ भन्न सक्ने आधार बनाएको छु ।
यसोभए, नेपाली काँग्रेस पाल्पाका हरेक संगठनहरु क्रियाशिल छन् ?
एकदमै, हरेक संगठन मात्र होइन पार्टीका हरेक क्रियाशिल सदस्यहरु नाममात्रको क्रियाशिल होइन कामले नै क्रियाशिल छन् । हाम्रो पार्टीका हरेक कार्यकर्ता समक्ष आफ्ना समस्याहरु राख्न र भन्न सक्ने बनाएको छु । मलाई आज पनि याद छ, वीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, “संगठन यस्तो अस्त्र हो, जो बढी चले खिएर जान्छ, नचले खिया लाग्छ ।” मैले त्यही भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लागे । चुनावका वेला भोट दिने फरक कुरा हो, पार्टीका सदस्यहरु पनि क्रियाशिल हुनुपर्छ भनेरनै संगठन वलियो बनाउने काम गरेको छु । आज पार्टीका कार्यकर्ताहरु निरन्तर र अभिछिन्न रुपमा चलायमान गराएको छन् । हामीले पटक पटक घरदैलो अभियान गरी पार्टी चलायमान अभियान गरेका छौं । पार्टीका जनवर्गिय संगठनहरु देखी अन्य सभेच्छुक संगठनहरु सबै क्रियाशिल छन् । पाल्पामा झण्डै ९ हजार वढी क्रियाशिल सदस्यहरु छन् ती सबै क्रियाशिल छन् । र पाल्पा एउटा यस्तो जिल्ला बनाएका छौं, जहाँ अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा क्रियाशिल सदस्यतामा समेत समस्या छैन् ।
बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा मुख्य उपलब्धीहरु चाँही के के भए ?
संघिय संरचनाः जव २०७० सालमा काँग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुक संघिय संरचनामा गयो । हामीले केन्द्रमा मात्रै होइन पाल्पामा १० स्थानीय तह तथा वडा छनौट, संघिय संरचना निर्माणका काममा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छौं । धेरै रस्साकस्सीका बावजुत हामीले हाम्रो भुमिका निभाएका छौं ।
निर्वाचन पछिको अवस्था सांगठनिक चुस्तताः २०७४ सालमा स्थानीय तह तथा केन्द्रिय निर्वाचन त भयो तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताले भनेजसरी काम गरे त ? सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ कि छैन भनेर हामी गाउँ गाउँ पुग्यौ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई घचघच्याउने काम गरयौं, खवरदारी गरयौ । जनताको अनुभूती कस्तो छ भनेर निर्वाचन पछिको अवस्था सांगठनिक चुस्तता भन्ने नाराका साथ हामी स्थानीय तहहरु पुग्यौ । पाल्पाका केही स्थानहरुमा अझैपनि आस्थाका आधारमा विभेद गर्ने, सिंहदरवारको अधिकार भनेपनि निरकुंस लाध्ने कामहरु भइरहेको थियो, हामीले खवरदारी गरयौं । लोकतन्त्रलाई नाममा सिमित राखियो, लोकतन्त्र भनेको अभ्यास गर्ने हो भन्ने अनुभूती गराउन लाग्यौ, हामीले फरक पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्रै होइन हाम्रै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि घचघचाएका छौं । हामीले हाम्रो नेतृत्वबाट हरेक प्रशाशनिक कामहरु, हरेक विकास निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका छौं । विगतको अवस्थाबाट आमूल परिवर्तन भएका छन् । पार्टी कार्यालय बनाउने देखी देखी पार्टी चलायमान सम्मका कामहरु मेरो नेतृत्वले गरेको छ ।
नैतिकता सहितको पार्टी निर्माणमा प्रतिवद्धता ः नैतिकता सहितको पार्टी निर्माणमा प्रतिवद्धता भन्ने नाराका साथ हामी पुनः गाउँ गाउँ पुग्यौ । हामी नैतिकता र निष्ठामा अडिक हुनुपर्छ भनेर अभियान चलायौं । आज आम जनता राजनीतिलाई बितृष्णाको रुपमा हेरिराखेका छन् । राजनीतिबाट प्राप्त भूमिका के लागि ? आज दलहरु प्रतिको आकर्षण घटेको छ । यहाँ केही व्यक्तिहरुले पद्धती छोडेका कारण जनतामा बितृष्णा छाएको छ । म त के भन्छु भने, पद्धती खराव होइन, व्यक्तिले पद्धती छोडेका कारण बितृष्णा छाएको हो ।
आज मानिसहरु राजनीतिक दलले केही गरेनन्, नेताहरुले काम गरेनन् भनेर अन्य विकल्प खो िजगर्न थाल्दैछन् । दलको विकल्प दलै हो । नागरिक समाज हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प एकदलिय शासन हुन सक्दैन । लोकतन्त्र नै हो । प्रवृती र दम्भ का कारण पद्धती प्रति बितृष्णा जागेको छ । पद्धती आफैमा खराव होइन ।
गाउँ जाउँ गाउँमै रमाऔं, एक व्यक्ति एक सदस्य बनाऔं: हामीले पाल्पाका ८१ वटै वडाहरुमा गाउँ जाउँ गाउँमै रमाऔं, एक व्यक्ति एक सदस्य बनाऔं भन्ने नाराका साथ पार्टीलाई चलायमान गरायौं, सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा हुनुपर्छ भनेर लाग्यौं । मेरो सभापतित्वको नेतृत्वले अरु थुप्रै सामाजिक सेवाका कामहरु पनि गरेको छ । देशमा ठूला ठूला महाविपत्तिहरु आइपर्दा एउटा सामाजिक संस्थाको भूमिका निभाएको छ । भूकम्पका वेला होस या दैवी प्रकोपका वेला । हामीले हरेक दुःखसुखमा जनतालाई साथ दिएका छौं । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पूनःनिर्माण देखी कोरोना विपत्ति सम्म जनतासंगै जनताको घाउँमा मल्हम लगाउने काम गरेका छौं ।
अन्त्यमा, अव केही दिनमा नयाँ नेतृत्व आउदैछ तयारी कस्तो छ ?
पक्कै पनि मैले दुई कार्यकाल पाल्पाको पार्टी सभापति चलाए, बिधानत अव अर्को नेर्तृत्व आउनुपर्छ । साथीहरु आंकक्षि हुनुहुन्छ, मैले नामै किटान गरेर त भन्दिन तर केही साथीहरुको आकंक्षा छ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापति हुनका लागि वडा देखी क्षेत्रिय महाधिवेश प्रतिनिधि हुदै छनौट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप नै साथीहरु आउनुहुन्छ । राजनीतिबाट प्राप्त भूमिकामा रहेका व्यक्तिले पध्दति अनुसारको प्रवृत्ति देखाउन नसक्दा पध्दति माथि नै वितिष्णा जागेको हो, त्यसैले संगठन केन्द्रित नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
म दुई कार्यकाल पार्टी सभापति हुँदा, यो पदलाई भजाउने काम कहिले पनि गरिन, जहिले म कुर्सीमा आए म कहिले पार्टी हित विपरित गईन । आज हरेक व्यक्ति तथा कार्यकर्ताहरु उत्साहित छन् । हरेक विकास तथा प्रशासनिक कामहरुमा सहयोग गरेका छौं । अवको नेतृत्व पनि त्यस्तै आओस भन्न चाहन्छु ।
बगनासकालीका किसानलाई कृषि औजार वितरण
पाल्पामा मृत अवस्थामा रहेको मृग बरामद